“ရခိုင်နဲ့မြွှေပွေးတွေ့ရင် ရခိုင်ကိုသတ်” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » “ရခိုင်နဲ့မြွှေပွေးတွေ့ရင် ရခိုင်ကိုသတ်”
Posted by King on May 3, 2011 in Education, Environment | 18 comments
“ရခိုင်နဲ့မြွှေပွေးတွေ့ရင် ရခိုင်ကိုသတ်”ဟုသော စကားပုံအား တစ်ချို့မှာ အမှတ်မှားတတ်ကြသည်။ ရခိုင်နဲ့မြွေပွေးတွေ့ရင် ရခိုင်ကို သတ်ဆိုသည်မှာ ရခိုင်လူမျိုး၊ လူရခိုင်ကို သတ်ခိုင်းခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ရခိုင်ငှက်ပျောသီးကိုဆိုလိုသည်။ ထိုစကားပုံအား အမှတ်မှားပါက အယူတစ်မျိုးပြောင်းသွားစေသည်။ မြွေပွေးနဲ့ ရခိုင်မှာ ရခိုင်လူမျိုးတို့က ဆိုးသွမ်းသည်ဟု အထင်ရှိသွားနိုင်သည်။ မြန်မာစာတို့သည် ဖတ်တော့အသံ ရေးတော့အမှန်ဆိုသလို ရှိကြပါသည်။
“ရခိုင်နဲ့မြွှေပွေးတွေ့ရင် ရခိုင်ကိုသတ်”ဟုပြောကြသည် ဆိုလိုရင်းမှာ မြွှေပွေးသည် ပေါက်လိုက်တာနဲ့ တခါတည်း ဆေးကုသချိန်မရဘဲ သေဆုံးတတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရခိုင်ငှက်ပျောသီးဟာ မည့်သည်အဆိပ်ကိုမဆို အဆိပ်များမပြန့်ပွားအောင် ထိမ်းထားနိုင်တဲ့စွမ်းရည် ရှိသောကြောင့် တကယ်လို့များ မြွှေပွေးအဆိပ်ကိုမိခဲ့သော် “ရခိုင်ငှက်ပျောသီးမှ အစေး ကိုထုပ်ယူ၍မြေပွေးကိုက်ခဲ့သော နေရာအား ၎င်းအစေးဖြင့် လိမ်းကျန်ပါကမြွေဆိပ်အား ထ်ိမ်းထားနိုင်စွမ်းရှိသည်”။
ငှက်ပျောသီးဘယ်အမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်.. အစေးပဲဖြစ်ဖြစ်.. မြွေဆိပ်ကို သက်သာရာရစေတယ်လို့.. ..ဂိုဂယ်ဆရာမေးတာ..ရှာမတွေဖူး..။ ဆရာဝန်တွေ သိရင်တေ့ာ ပြောပါနော..။
မြွေကိုက်ရင်.. ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာပေါ့..။ ဆေးရုံနီးရင်..ဆေးရုံသာပြေးပါ..။
မြန်မာလူမျိုးတွေမှာ.. အခြေခံကကို လူမျိုးရေးခွဲခြားမုန်းတီးမှုဖြစ်စေတဲ့ စာ..စကားတွေတော်တော်များများရှိပါတယ်.။
ရှေးကတိုင်းရင်းသားနယ်တွေကို သိမ်းချင်တာမို့ .. စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေးလုပ်တဲ့အနေနဲ့.. ပြန်နှံ့အောင် လုပ်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်ြပီး.. ဒီခေတ်အထိလည်း တချို့ ပြောဆိုသုံးစွဲနေကြတုန်းပါပဲ.။
ဒါတွေကို ပပျောက်အောင်.. ဥပဒေထုတ်ပြီးတော့ကို ပိတ်ပင်တားဆီးသင့်တယ်ထင်ပါတယ်.။
ယူအက်စ်မှာဆိုရင်တော့ ..Antidiscrimination (EEO) Law တွေလိုပေါ့..။
1. Clean the wound carefully, and stay calm. Wash with clean water. Use an alcohol-soaked pad if one is available. Try not to Panic.
2. Treat the wound with an antibiotic ointment. Applyathin coating of antibiotic ointment.
3. Bandage the wound. This will protect it and help to discourage infection. Pay attention to the wound as it heals for redness or streaking or other signs of infection.
These steps for treating venomous snakebites assume that you have no special equipment such asasnakebite kit and do not have immediate access to medical services.
1. Get the victim away from the snake. Your first priority is to make sure that neither you nor the victim receive any additional snakebites.
2. Remove clothing or constricting items. Bites from venomous snakes can cause rapid and severe swelling. Remove clothing or jewelry from the area.
3. Minimize activity. Higher levels of activity will increase blood flow and increase the spread of venom through the body.
4. Do not cut the bite site or use your mouth to suck out the poison. These are likely to be ineffective and can increase the likelihood of infection.
5. Clean the bite site with soap and water. Cover the wound withadressing.
6. Wrap the bite site withatight elastic bandage. You can use something like an Ace bandage for this, or can fashion one fromastretchy shirt or other article of clothing.
The intent of this step is to slow capillary and venous blood flow (flow back to the heart), but permit arterial blood flow (away from the heart).
Check forapulse below the overwrap. It should be present.
7. Splint the bitten limb to prevent motion. Keepathe splinted extremity below the level of the heart.
8. Keep the victim calm and protected from the environment. Let the victim rest until you can get him medical attention. If the victim is conscious, make him drink fluids.
ကျနော်ကတော့ ဘယ်လူမျိုးကိုမှမမုန်းဘူး ဘယ်လူမျိုးကိုမှ အမြင်မစောင်းဘူး ဘယ်လူမျိုးကိုမှထိခိုက်ပြောဆိုတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူး ကျနော်အတွေ့ များတာတော့ လူမျိုးကိုခွဲခြားနေတာ တိုင်းရင်းသားတွေပိုများတယ်လို့ထင်တယ် တစ်ချို့ တိုင်းရင်သားတွေမှာတွေ့ ရတတ်ပါတယ် ကိုယ့်လူမျိုးမှမဟုတ်ရင် လူမဟုတ်တော့သလိုပဲ ကျနော်ယူနီတက်နေတုန်းက တိုင်းရင်းသားသူငယ်ချင်းတွေရှိခဲ့ဖူးပါတယ် နှစ်မျိုးသုံးမျိုးလောက်က သူတို့အမျိုးမှသူတို့အမျိုးကိုဖြစ်နေတော့တာပါပဲ။ လူငယ်တွေချစ်ကြကြိုက်ကြရင်တောင် ကိုယ့်လူမျိုးကိုမရွေးချယ်လို့ ကျန်တဲ့လူတွေကလဲဝိုင်းပြောကြတာမျိုးကြုံဖူးတယ်……
ကျနော်အတွက်ကတော့ အထူးအဆန်းကြီးပါပဲ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်အပြည့်ရှိတဲ့သူတို့ကိုလဲ ချီးကျူးပါတယ်။ လူမျိုးကိုမဟုတ်ပဲ လူကိုပေါင်းကြည့် သိကြမှာပါ
တိုင်းရင်းသားတွေက ပိုပြီးခွဲခြားတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့မှာ လည်း ၀မ်းနည်းစရာ အတိတ်တွေရှိခဲ့လို့ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပညာတတ်တွေဖြစ်ပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ အမြင်တွေကို ပြင်သင့်ပါတယ်။ အတူတူနေမရမယ့် အတူတူ သင့်သင့်မြတ်မြတ်ရှိမှ စိတ်ချမ်းသာမှာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ အတင်းအကျပ်မဟုတ်ပဲ ကြုံရင်ကြုံသလို နည်းနည်းချင်း တိုက်တွန်းတတ်ပါတယ်။ အားလုံးကိုလည်း တိုက်တွန်းစေချင်ပါတယ်။
အရေးကြီးတာကတော့ ဒီလိုစကားမျိုးကိုလုံးဝ ရှောင်ဖို့ပါ။ စနောက်တာက အစပေါ့။
အခုလို website ပေါ်တင်ပီးရှင်းပေးတာ ကျေးဇူးပါ king ရာ …
မဟုတ်ရင် … မသေမချာလေး .. သံယောင်ကြားမိတာနဲ. … အမုန်းပွားနေကြတာက ရှိသကိုးကွဲ. …
အခုလိုသိရတာဝမ်းသာပါတယ်၊ နားလည်မှုမှားနေတာကိုပြင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်၊ ငှက်ပျောသီးသာမပါရင် ဒီစကားပုံအတိုင်းဆိုထောင်ကျကိန်းပဲ။
ဒါပေမယ့် အစွန်းရောက်သွားရင်တော့ ……….
သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ အတိုင်း နေထိုင်နိုင်ကြရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ဗျ
ဗဟုသုတ အသစ် အနေနဲ့ မှတ်သားသွားပါတယ်။
ရခိုင်ငှက်ပျောပင်ကို အရင်ခုတ် ပြီးရင်မြွေပွေးကို
တစ်ဖက်လောက်နော် သောက်၇င် မမေ့ပါနဲ့
ရခိုင်အသိတဦးပြောတာတော့ မူရင်းအဓိပ္ပါယ် အစစ်က “ကုလားမနိုင် ရခိုင်မေး” တဲ့။ ဟိုးအရင်က နယ်စပ်ဖြတ်ဝင်လာတဲ့ ဘကုန်းတွေကို အရမ်းနိုင်တယ်ပေါ့။
ကြားဖူးတာတော့ ပင့် ရစ်မနိုင် ရခိုင်မေး ဆိုပဲ။ ယပင့် ရရစ်ကို ရခိုင်တွေက အင်မတန်ကျွမ်းဆိုပဲ။
ဒီအဖွဲ့ထည်းမှာ အရိုးဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့ ချာတိတ်လေးတစ်ယောက်ရှိတယ်
( တစ်ကယ့်အဖြစ်ပျက်တွေကိုပြောတာနော် လူမျိုးရေးနဲ့မဆိုင်ဘူး
ကျုပ်တို့ဘော်ဒါရခိုင်လူမျိုးတွေကိုယ်တိုင် အပျော်သဘော နောက်ပြောင်ပြီးပြောကြတာ
သူတို့ဆိုလိုတာက သူတို့ရခိုင်လူမျိုးတွေ ဘယ်လောက် အစွန်းအစရှိတယ်ဆိုတာကိုပါ
ကြက်ခိုးတာကတော့ ကျုပ်လဲခိုးတတ်တယ် ခိုးလဲခိုးဘူးတယ် )
တင်ထားတဲ့ပုံကို အားမနာ မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပုက ကြက်ခိုးတယ်ဆိုတော့
ပင့်ရစ်မနိင်ရင်တော့ ရခိုင်ကိုမေးလို.ရတယ် .. အင်မတန်ကျွမ်းတာ …
နောက်ပစ် ကိုတော့သွားမမေးနဲ. ..
သေး ကိုလဲ သေး ပဲ
သဲ ကိုလဲ သေး ပဲ .. အသံထွက်တာ .. အဟီးးး
လှောင်တာမဟုတ်ဘူး .. ကိုယ့်လူမျိုးတွေရဲ. (ကဲ .. ပြောလိုက်ပြီကွာ) .. ရခိုင်လူမျိုးမှန်းသိသာစေတဲ့ လေယူလေသိမ်းလေးတစ်ခုကို ကြုံလို.ပြောပြတာ ..
ရခိုင်ဆိုတာ ရက္ခိတ ဆိုတဲ့စကားက ဆင်းသက်လာတာတဲ့။ ရက္ခိတတရား ဆိုတာ အမျိုးဂုဏ်ကို စောင့်ဖို့ ပြောတာတဲ့။ အခုခောတ်တော့ တခြားလူမျိုးနဲ့လည်း ယူနေပါပြီတဲ့ အရင်လို တယူသန်ကြီး မဟုတ်ကြတော့ပါဘူးတဲ့ သူငယ်ချင်းကပြောတာ။ ရခိုင်တိုင်းလည်း အသားမမည်းပါဘူး။ ဘနဲ့ ကပ်နေတဲ့ ပြည်နယ်ကလူတွေပဲ မဲတာပါ။ ရေမြေလိုက်တာပေါ့။ မှီ့ သူငယ်ချင်းက ကျောက်ဖြူဇာတိ ဆိုတော့ နေတိုးတို့လို အသားအရည် ဖြူဖွေးနေတာပဲ။ တရုတ်ရှုံးတယ်။
အနော်သိတာတော. ကုလားမကိုနိုင်ချင်ရင် ရခိုင်ကိုမေးလို.သိတာဗျို.